ရောမတို့၏ဒဏ္endsာရီများ - အုတ်မြစ်မှအလယ်ခေတ်အထိ | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 07/05/2021 10:35 | ယဉျကြေးမှု, ရိုးမား
ရောမတို့၏ဒဏ္legာရီများသည်ဇာစ်မြစ်၏မူလအစဖြစ်သည် ထာဝရစီးတီး။ သင်သိသည့်အတိုင်းသူ့ကိုယ်ပိုင်အုတ်မြစ်တွင်နောက်ကွယ်မှဒဏ္legာရီသမိုင်းရှိသည် Romulus နှင့် Remus။ ထို့အပြင်သမိုင်းကြောင်းများစွာရှိသောမြို့တစ်မြို့သည်အခြားဒဏ္myာရီပုံပြင်များကိုအိမ်တွင်ထားရမည်။
ငါတို့အားလုံးကိုမင်းတို့မပြောနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းတို့ကိုပြောမယ့်ပုံပြင်တွေဟာရောမရဲ့အဖိုးတန်ဆုံးသောဒဏ္legာရီများထဲမှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမင်းတို့သူတို့ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌ပျော်မွေ့လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်ပါတယ်။ သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောပုံပြင်များဘာမျှမပါပါ ပထမဘုရင်များ, နှင့် emကရာဇ်မင်းကြီးများ အဆိုပါဂန္ထဝင်ခေတ်မှောင်မိုက်နှင့်အတူ အလယ်ခေတ် လှပသောအီတလီမြို့၏မြို့ (ဤတွင်ငါတို့သည်သင်တို့စွန့်ခွာ ၎င်း၏အထိမ်းအမှတအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်) ။ ဒါပေမယ့်နောက်ထပ် ado မရှိရင်ထာဝရစီးတီးအကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးဒဏ္icalာရီပုံပြင်များနှင့်အတူသွားကြကုန်အံ့။
1.2 Sabine အမျိုးသမီးများမုဒိမ်းမှု၊ နောက်ထပ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်သောရောမဒဏ္Legာရီ
1.3 အဆိုပါ Mazzamurelli ၏လမ်းကြား
1.4 Castel Sant'Angelo ရောမတို့၏ဒဏ္legာရီပုံပြင်များ
1.5 Passetto di Borgo
1.6 Tiber ကျွန်း
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲရောမရဲ့ဇာစ်မြစ်ဟာဒဏ္icalာရီဆန်ဆန်နောက်ခံရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါ၏ကျော်ကြားဇာတ်လမ်းတွဲပါဘူး အဆိုပါ Sabine ၏ပြန်ပေးဆွဲရောမမြို့သည်ထိုညဉ့်တွင်ကြီးပြင်းလာသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရဲ့အားလုံးနှင့်အတူသွားကြကုန်အံ့။
Romulus နှင့် Remus ကို ၀ ံပုလွေကလေးမွေးသည်
ရောမတို့၏ဒဏ္thာရီဇာစ်မြစ်များသည်ဘီစီ ၈ ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ရောမတို့၏ဒဏ္legာရီပုံပြင်သည်အစောပိုင်းကပင်စတင်ခဲ့သည်။ Ascanio, သား နေပြည်တော်, Trojan သူရဲကောင်း, Tiber ၏ဘဏ်များအပေါ်မြို့တည်ထောင်ခဲ့သည် Alba Longa.
နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဤမြို့၏ဘုရင်ကိုခေါ်ခဲ့သည် Numitor သူ့အစ်ကို Amulium သူ့ကို dethroned ။ သို့သော်သူ၏ပြစ်မှုသည်မရပ်တန့်ခဲ့ပါ။ ရာဇပလ္လင်ကိုအဘယ်သူတောင်းဆိုလိမ့်မည်နည်း။ Rea Silvia, အပျိုစင်ဆက်လက်နေထိုင်ရန်လိုအပ်သည့် Vestal ဖြစ်လာရန်။ သို့သော်မကောင်းသော Amulio ဘုရား၏အလိုတော်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး Marte.
ဒီတစ်ခုကအမွှာ 'Rea ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ် Romulus နှင့် Remus။ သို့သော်သူတို့သည်မွေးလာသောအခါဆိုးသွမ်းသောဘုရင်ကသူတို့ကိုသတ်လိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်သူတို့ကိုတောင်းထဲထည့်ပြီးတိဗက်မြစ်ထဲ၌ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါခြင်းတောင်းကိုကမြင်ကြရှိရာတောင်ခုနစ်ခုအနီး, ပင်လယ်နှင့်အလွန်နီးကပ်လှည့်ပတ်ပြေးလေ၏ မြေခွေးမ။ သူမသည်သူမ၏ lair ၏ကလေးများကယ်တင်နှင့်နို့စို့ နန်းတော်တောင် ထိုသူအားသူ၏အိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသောသင်းအုပ်ဆရာတစ် ဦး ကရှာတွေ့သည်အထိ၊ သူ၏ဇနီးကပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သည်။
လူကြီးများအနေဖြင့်လူငယ် ၂ ယောက်သည်အူလီယိုကိုနေရာ ချ၍ Numitor နေရာတွင်အစားထိုးခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးမှာ Romulus နှင့် Remus တို့သည် Alba Longa ကိုလိုနီနယ်မြေကိုပင်မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူမ - ဝံပုလွေသူတို့ကိုနို့စို့ရှိရာနှင့်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်များကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော်မြို့သစ်တည်ဆောက်မည့်နေရာအတိအကျနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုသည်အဆုံးသတ်မည့်နှစ်ခုကြားတွင်ကြေကွဲဖွယ်အငြင်းပွားမှုဖြစ်စေခဲ့သည် Remo သေဆုံးခြင်း သူ့အစ်ကို၏လက်၌။ ဒဏ္legာရီအရ, Romulus အရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည် ရောမမြို့၏ဘုရင်ဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းသမိုင်းပညာရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုပြုလိုပါကဘီစီ ၇၅၄ တွင်ဖြစ်သည်။
Sabine အမျိုးသမီးများမုဒိမ်းမှု၊ နောက်ထပ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်သောရောမဒဏ္Legာရီ
Romulus ခေတ်တွင် Sabine အမျိုးသမီးများအားပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်အကျော်ကြားဆုံးသောရောမဒဏ္legာရီပုံပြင်လည်းပါ ၀ င်သည်။ မြို့တည်ထောင်သူသည်လာစီယိုမြို့မှမည်သူ့ကိုမဆိုနိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
သို့သော်သူတို့သည်အားလုံးနီးပါးအမျိုးသားများဖြစ်ခဲ့ရာရောမတို့၏ကြီးထွားမှုကိုမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါ။ Romulus ထို့နောက်သတိပြုမိသည် ဥပုသ်နေ့၏သမီးဖြစ်ကြ၏အနီးအနားရှိတောင်ကုန်း၌နေထိုင်သော အဆွေတော် သူတို ‹သည်ပြန်ပေးဆွဲခြင်းငှါသွားလေ၏။
အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပါတီကြီးတစ်ခုကိုစီစဉ်ပြီးအိမ်နီးချင်းတွေကိုဖိတ်ခဲ့တယ်။ Sabine များသည်စပျစ်ရည်ကြောင့်အလွန်အမင်းအံ့အားသင့်သွားသောအခါသူတို့၏သမီးများကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးရောမသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဒါပေမယ့်ဇာတ်လမ်းကအဲဒီမှာအဆုံးသတ်မထားဘူး။
ထိုအတောအတွင်းသူသည်မြို့တော်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သည် သရက်လက်တင်စကားတော်၏ဘုရင်ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။ သူတို့သမီးများပြန်ပေးဆွဲခံရပြီးနောက်ရောမကိုစစ်ကြေငြာခဲ့စဉ်ကမိန်းကလေးသည်leftကရာဇ်မင်းနှင့်လက်ဝဲလက်၌ရှိသည့်အရာများကိုလဲလှယ်လျှင်သူမသည်မြို့တော်သို့လျှို့ဝှက်ဝင်ပေါက်ကိုပြလိမ့်မည်ဟုmadeကရာဇ်မင်းနှင့်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ သူသည်ရွှေလက်ကောက်ကိုရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် Sabine များသည်ရောမသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုလျှို့ဝှက်စွာသိသောအခါဘုရင်က Tarpeii အားဒိုင်းများဖြင့်ချေမှုန်းပစ်ရန်သူ၏စစ်သားများကိုမှာထားခဲ့သည်။
သို့သော်ဤပုံပြင်၏အဆုံးအခြားမူကွဲရှိပါတယ်။ ထိုမိန်းမငယ်၏သစ္စာဖောက်မှုကိုသတိပြုမိသောရောမများက ထိုအချိန်မှစ၍ တိဘက်ဟုခေါ်တွင်သောချောက်ကမ်းပါးသို့ပစ်ချခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည် Tarpeya ကျောက်.
နောက်ဆုံးတွင် Sabine နှင့်ရောမလူမျိုးတို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်၊ အစား၊ ပြန်ပေးဆွဲခံရသည့်မိန်းကလေးများကြောင့်ဖြစ်မလာခဲ့ပါ နှစ် ဦး စလုံးဗိုလ်ခြေအကြားရပ်နေ၏ တိုက်ခိုက်ရေးကိုရပ်တန့်ရန်။ ရောမတွေနိုင်ရင်မိဘတွေနဲ့ညီအစ်ကိုတွေကိုဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်နှစ်နိုင်ငံလုံးငြိမ်းချမ်းရေးကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
အဆိုပါ Mazzamurelli ၏လမ်းကြား
Mazzamurelli လမ်း၊ အခြားရောမဒဏ္endsာရီပုံပြင်တစ်ပုဒ်
သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ နင် ရောမ, သင်မှစ။ , သောသေးငယ်တဲ့လမ်းကိုတွေ့လိမ့်မည် စိန့် Chrysogonus ၏ဘုရားကျောင်းတက်ရောက်ရှိ San Gallicano ၏။ ဒီလမ်းကြားကဒါ အဆိုပါ Mazamurelli။ ဒါပေမဲ့ရောမမှာရှိတဲ့နာမည်တောင်မှနာမည်ပေးထားတဲ့ဒီသတ္တဝါတွေကဘယ်သူတွေလဲ။
သူတို့ကိုကလေးငယ်တွေနဲ့ခွဲခြားသိမြင်နိုင်တယ် ဆိုးပါရမီ သောကမ္ဘာ၏ဒဏ္ologiesာရီများ၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာလမ်းသွားလမ်းလာများမှာလှည့်စားနည်းလေးတွေလုပ်ရတာကိုပျော်မွေ့တဲ့အဲလ်ဖ်လိုမျိုးပဲ။
တကယ်တော့ဒီဒဏ္legာရီထဲမှာပါတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေထဲကတစ်ခုကသဘာဝလွန်သတ္တဝါများကိုမြင်တွေ့တဲ့အတွက်နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်နဲ့လူသိများတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဤလူ၏အိမ်ကိုလမ်းပေါ်တွင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည် သရဲ.
သို့သော်, mazzamurelli န်းကျင်အရာအားလုံးမကောင်းဘူး။ ဤရောမဒဏ္legာရီ၏အခြားဇာတ်ကြောင်းပြောသူများအတွက်၎င်းတို့သည်အိမ်နီးချင်းများကိုသူတို့၏နာမည်ဖြင့်ခေါ်သောလမ်းမှအကာအကွယ်ပေးရန်ရည်ရွယ်ထားသောအကျိုးရှိသောသတ္တဝါများဖြစ်သည်။
Castel Sant'Angelo ရောမတို့၏ဒဏ္legာရီပုံပြင်များ
ထာဝရစီးတီး၏အရေးကြီးဆုံးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး Castel Sant'Angelo တွင်ဒဏ္legာရီများစွာရှိသည်။ ဖြစ်ရန်တည်ဆောက်ခဲ့သည် Emကရာဇ် Hadrian ၏ Mausoleumနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်နီးပါးသမိုင်းရှိခဲ့သည် ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဒဏ္legာရီပုံပြင်များစွာ၏မြင်ကွင်းဖြစ်သည်ကိုသင်မအံ့သြသင့်ပါ။
သူတို့ထဲကလူကြိုက်အများဆုံးက၎င်း၏အမည်၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ခေတ်၏ ၅၉၀ တွင်ရှိကြသည်။ ရောမနှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသည်ဘေးဥပဒ်ကပ်ဘေးကြီးကျရောက်စေခဲ့သည် ဂရက်ဂိုရီ စီတန်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ရဲတိုက်သို့ရောက်သောအခါ၊ ကောင်းကင်တမန်မင်းတပါး ကူးစက်ရောဂါ၏အဆုံးကိုကြေညာရန်သူ၌သူ၏လက်၌ထားရှိ၏။
ထို့ကြောင့်ရဲတိုက်ကို de ဟုခေါ်သည် Sant'Angelo, ဒါပေမယ့်အပြင်, တစ် ဦး ကောင်းကင်တမန်မင်း၏ပုံက၎င်း၏ပြန်လည်အပေါ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်အများအပြားပြန်လည်ထူထောင်ရေးခံယူပြီးနောက်, သင်ယနေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
Passetto di Borgo, ရောမတို့၏ဒဏ္manyာရီများစွာ၏မြင်ကွင်းများ
ကျနော်တို့ဒဏ္legာရီများနှင့်ဒဏ္icalာရီပုံပြင်များနှင့်ပြည့်ဝသောရောမအချက်များနောက်ထပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ယခင်ဆောက်လုပ်ရေးမှဝေးမသွားကြဘူး။ အရှေ့ လမ်းလျှောက် သို့မဟုတ်ခိုင်ခံ့သောလမ်းသည် Sant'Angelo နှင့်အတူအတိအကျပေါင်းစပ်လိုက်သည် ဗာတီကန်.
ဒါဟာတစ်မိုင်ဝက်လောက်ပဲရှိသေးတယ် အာလူးနှင့်အခြားဓမ္မဆရာများပေါက်ကြားခဲ့သည် သူကစစ်ပွဲနှင့်လုယက်မှုကာလအတွင်းပုန်းအောင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော်ဒဏ္endာရီတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာအကြင်သူသည်အကြိမ်ခုနစ်ဆယ်ကိုဖြတ်သန်း။ သူတို့၏ပြproblemsနာများအားလုံးအဆုံးသတ်သွားသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်
ဒါကြောင့်ဒဏ္legာရီဆန်ဆန်လွန်ခဲ့သော Borgo ဇာတ်လမ်းဟာရုပ်ရှင်၊ တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများတွင်ပင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
ဒီကျွန်းပေါ်ရှိရောမဒဏ္legာရီခရီးစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြီးဆုံးပါပြီ။ ဒီကျွန်း၏အလယ်တွင်ယနေ့တိုင်သင်မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လှေကဲ့သို့ပုံသဏ္andာန်ရှိပြီးအမြင့် ၂၇၀ မီတာနှင့်အကျယ် ၇၀ မီတာရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ရှေးအချိန်ကတည်းကပင်ဒဏ္myာရီပုံပြင်များ၏အကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့သည်။
အမှန်မှာ၊ သူတို့သည်သူတို့၏အသွင်အပြင်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ရောမဘုရင်၏နောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ အဆိုပါထိပ်တန်း Tarquinioမိမိနိုင်ငံသားချင်းများကမြစ်ထဲသို့ပစ်ချခံခဲ့ရသည်။ သူသည်အကျင့်ပျက်သူဖြစ်ပြီးဂျုံပင်ကိုခိုးယူခဲ့သည်။ ဤဖြစ်ရပ်ပြီးနောက်မကြာမီတွင်ကျွန်းပေါ်လာပြီးရောမများကmonကရာဇ်မင်း၏ကိုယ်ခန္ဓာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စုဆောင်းနေသောအနည်အနှစ်များကြောင့်မူလကစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။ သူခိုးသောဂျုံစပါး.
ဤအရာအလုံးစုံတို့အတွက်, Tiberina အမြဲမျိုးစေ့ကိုကြဲ ကြောက်တယ် ရောမနိုင်ငံသားများအကြား။ ယင်းသည်ရာစုနှစ်များစွာအထိကပ်ရောဂါကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်အထိဖြစ်သည် မြွေ ရောဂါအဆုံးသတ်ကြောင်း (ဆေး၏သင်္ကေတ) ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Aesculapius ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်ဗိမာနျတျော ကျွန်းပေါ်မှာကသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ရပ်တန့်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည်ရောမနတ်ဘုရားကိုးကွယ်သောအရှင်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကြိုက်အများဆုံးအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြခဲ့သည် ရောဒ၏ဒဏ္.ာရီ။ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့တွင်အခြားသူများစွာရှိရမည်။ ပိုက်လိုင်းထဲတွင်ကျန်ရှိနေသေးသောသူများနှင့်အခြားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောကောင်းပြောမည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာရည်ညွှန်းသည် Nero Nကရာဇ်နှင့် Santa Maria del Pueblo ၏ Basilica, တ Dioscuri Castor နှင့် Pollux၏ အမှန်တရား၏ပါးစပ် သို့မဟုတ်ဇာတ်ကောင်အဖြစ်ရှိသည်သောများစွာသော ဟာကြူလီ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ရိုးမား » ရောမတို့၏ပုံပြင်များ
ပုံမှန် Jalisco ဝတ်စုံ